Zviri kundinetsa kuti B2B Vashambadzi vanowanzoendesa kuwanda kwemishandirapamwe uye nekugadzira runyararo rusingagumi rwezvinyorwa kana zvemagariro midhiya zvigadziriso pasina chaicho chidiki, chakanyatsogadzirwa. raibhurari yezvinyorwa kuti tarisiro yega yega iri kutsvaga kana uchitsvaga mumwe wavo anotevera, chigadzirwa, mupi, kana sevhisi. Nheyo yezviri mukati mako inofanirwa kupa zvakananga yako rwendo rwevatengi. Ukasadaro… uye vakwikwidzi vako vachiita… ucharasikirwa nemukana wako wekutanga bhizinesi rako semhinduro yakakodzera.
tsvakurudzo - Pane here zvechipiri zvekutsvagisa zviwanikwa zvakanyora zvakazara nyaya iyi uye zvinopa huwandu uye zvakajairika tsananguro kudambudziko? Kuwedzera iyi data uye izvi zviwanikwa zvinovimbisa mutengi anogona kuti iwe uri ruzivo rune ruzivo. Ongororo yepuraimari inonakidza zvakare… inowanzo govaniswa uye inogona kuvaka ruzivo rwechiratidzo chako sevatengi vanotsvaga dambudziko.
Zviite-Iwe-Iwe - Kujekesa mashandiro anoita mutengi basa pachezvake hakusi kuvasundira kure nemhinduro yako, zvinovapa mufananidzo wakajeka wezve zviwanikwa uye mutsara wenguva wakakosha kuti uite basa ivo pachavo. Inogona kuvabatsira kufumura maburi mune tarenda, zvinotarisirwa, bhajeti, nguva, nezvimwe ... uye kubatsira kunyatsovasundira kune chako chigadzirwa kana sevhisi seimwe sarudzo. Sanganisira anovimbika wechitatu-bato zviwanikwa zvinogona kuvabatsira.
Zvinosuruvarisa, McKinsey inopa data idzo isingasviki 30% yemakambani ese ari kubudirira mukushandura bhizinesi ravo digitally. Kambani yako inogona kubaya tarenda kuti ibatsire mukuita, jekiseni vanopa mazano kuti vabatsire, kana kuvimba pamapuratifomu auri kugadzira. Kujova tarenda kunoda danho rekukura iro mabhizinesi mazhinji anorwira nawo sezvo paine kushorwa kwepanyama kushanduka mukati. Vanopa mazano avo vanoramba vachibatsira mabhizinesi mukushandurwa kwavo kwedhijitari vanonyatsonzwisisa njodzi, mavakiro ekutenga-mukati, maitiro ekufungidzira ramangwana, maitiro ekukurudzira uye kuvaka kugutsikana kwevashandi, uye kuisa pamberi shanduko yedhijitari yekubudirira. Mapuratifomu dzimwe nguva anobatsira, asi hunyanzvi hwavo uye kutarisisa hakuwanzoenderana neindasitiri yako, vashandi vako, kana danho rako rekukura.
Kurera - Makambani haagare aine bhajeti kana nguva yekutora mari nekukurumidza muzvigadzirwa zvako kana masevhisi. Uye ivo havadi kugara vachibata yako yekutengesa timu uko kwavano vhura ivo pachavo kune kukumbira. Kupa zvichena, kurodha pasi, maemail, webinars, podcast, kana dzimwe nzira dzekuti tarisiro yako irambe ichiwana kubatwa uye kufuridzirwa pasina kutengeswa kwakakosha sezvo tarisiro ichiramba ichizvitungamira-yavo rwendo rwekutenga.
Parizvino, zvemukati zvinofanirwa kuzvimonera zvese pamwe uye waunotenga mutengi anofanirwa kunyatsonzwisisa kuti mhinduro yako yakavakodzera here kana kwete. Mabhizinesi anowanzo tya kukanzura chero tarisiro mune tariro yekuti vatengesi vavo vanomuka kuzorova nemutengi. Ndiwo mutoro wakakura uye unofanirwa kudzivirirwa. Chako chiratidzo chichavaka kutendeseka nekunongedza tarisiro kune iyo rudyi mhinduro, kwete nekuyedza kutengesa chako chigadzirwa kana sevhisi kune wese munhu!